Diuterọnọmi 10 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Mosis wapụtara mbadamba nkume abụọ ọzọ (1-11)
Ihe Jehova chọrọ (12-22)
Tụọ egwu Jehova, hụkwa ya n’anya (12)
10 “N’oge ahụ, Jehova gwara m, sị, ‘Wapụtara onwe gị mbadamba nkume abụọ ndị dị ka ndị mbụ ahụ,+ bịakwute m n’ugwu. Jirikwa osisi rụọrọ onwe gị igbe. 2 M ga-ede okwu ndị dị ná mbadamba nkume ndị mbụ ahụ ị kụriri ná mbadamba nkume ndị a. Ị ga-etinyekwa ha n’igbe ahụ.’ 3 M wee jiri osisi akeshịa rụọ igbe, wapụtakwa mbadamba nkume abụọ ndị dị ka ndị mbụ ahụ. M bu mbadamba nkume abụọ ahụ n’aka+ gbagoo n’ugwu ahụ. 4 O wee dee ihe ahụ o deburu ná mbadamba nkume ndị mbụ ahụ+ ná mbadamba nkume ndị a, ya bụ, Iwu Iri ahụ,*+ bụ́ ihe Jehova si n’ọkụ gwa unu n’ugwu ahụ+ n’ụbọchị unu zukọtara.+ Jehova bunyekwara m ha. 5 M wee tụgharịa si n’ugwu ahụ gbadata+ ma tinye mbadamba nkume ndị ahụ n’igbe ahụ m rụrụ, bụ́ ebe ha ka dị, otú Jehova nyere m n’iwu. 6 “Ndị Izrel sizi Bierọt Bene-jeekan pụọ gawa Mosira. N’ebe ahụ ka Erọn nwụrụ, e liekwa ya n’ebe ahụ.+ Elieza nwa ya nwoke wee nọchie ya, malite ịrụ ọrụ nchụàjà.+ 7 Ha si ebe ahụ pụọ gawa Gọdgọda, sikwa na Gọdgọda gawa Jọtbata,+ bụ́ ala iyi dị iche iche na-asọ na ya. 8 “N’oge ahụ, Jehova họpụtara ebo Livaị+ ka ha na-ebu igbe ọgbụgba ndụ Jehova,+ ka ha nọrọ n’ihu Jehova na-ejere ya ozi, jirikwa aha ya na-agọzi ndị mmadụ,+ otú ha na-eme ruo taa. 9 Ọ bụ ya mere na ebo Livaị enwetaghị òkè ọ bụla n’ihe e kenyere ụmụnne ya. Ọ bụ Jehova ka ha ketara, otú Jehova bụ́ Chineke unu gwara ha.+ 10 Anọrọ m n’ugwu ahụ ụbọchị iri anọ, ehihie na abalị,+ otú m nọrọ n’oge mbụ. Jehova gekwara m ntị n’oge ahụ.+ Jehova achọghị ibibi unu. 11 Jehova wee sị m, ‘Gaa duru ndị a. Kwadebe ka unu pụọ, ka ha wee banye weghara ala m ṅụụrụ ndị nna nna ha iyi na m ga-enye ha.’+ 12 “Ugbu a, Izrel, gịnị ka Jehova bụ́ Chineke gị chọrọ n’aka gị?+ Ọ bụ naanị ihe a: ka ị na-atụ egwu Jehova bụ́ Chineke gị,+ ka ị na-eme uche ya n’ihe niile,+ ka ị hụ ya n’anya, ka i jiri obi gị niile na mkpụrụ obi* gị niile na-efe Jehova bụ́ Chineke gị,*+ 13 nakwa ka ị na-edebe iwu Jehova ma na-eso ntụziaka ya ndị m na-enye gị n’iwu taa, ka ihe dịrị gị ná mma.+ 14 Lee, ọ bụ Jehova bụ́ Chineke gị nwe eluigwe, ya bụ, eluigwe niile, nakwa ụwa na ihe niile dị n’ime ya.+ 15 Ma ọ bụ naanị nna nna unu hà ka Jehova mere ka ha bịa ya nso, ọ hụkwara ha n’anya. O si ná ndị niile họrọ unu, bụ́ ụmụ ha,+ otú o merela taa. 16 Meenụ ka obi unu dị ọcha,*+ kwụsịkwanụ ime isi ike.+ 17 N’ihi na Jehova bụ́ Chineke unu bụ Chi kacha chi niile+ na Onyenwenụ kacha ndị nwenụ niile, Chineke dị ebube, onye dị ike, na onye e kwesịrị ịna-atụ egwu, onye na-anaghị ele onye ọ bụla anya n’ihu,+ ọ naghịkwa anara aka azụ.* 18 Ọ na-ekpe nwa na-enweghị nna* na nwaanyị di ya nwụrụ+ ikpe ziri ezi. Ọ hụkwara onye mbịarambịa n’anya,+ na-enye ya nri na ákwà. 19 Unu ga-ahụkwa onye mbịarambịa n’anya n’ihi na unu bụbu ndị mbịarambịa n’Ijipt.+ 20 “Ọ bụ Jehova bụ́ Chineke unu ka unu ga-atụ egwu. Ọ bụ ya ka unu ga-efe,*+ unu ahapụkwala ya.* Ọ bụkwa aha ya ka unu ga-eji ṅụọ iyi. 21 Ọ bụ ya ka unu ga-eto.+ Ọ bụ Chineke unu, onye meere unu nnukwu ihe a niile na ihe ndị a dị egwu unu ji anya unu hụ.+ 22 Nna nna unu hà kpọ mmadụ* iri asaa gaa Ijipt,+ ma ugbu a, Jehova bụ́ Chineke unu emeela ka unu dị ọtụtụ ka kpakpando ndị dị n’eluigwe.+
^ Na Hibru, “na-ejere Chineke ozi.”
^ Na Hibru, “Bienụ obi unu úgwù.”
^ Ma ọ bụ “eri ngarị.”
^ Na Hibru, “ga-ejere ozi.”
^ Na Hibru, “unu ga-arapara ya n’ahụ́.”